Volkswagen Polo 2012 (#545580) ကို Yankin မြို့နယ်တွင်ရော... | CarsDB
2017-07-07 16:11:42 +0630
Volkswagen Polo 2012 (MDY လိုင်စင်) 1200 Cc (TSI turbo) Grade 4, Best Condition. 2012, 1.3 သာပြောတယ် ကားအရမ်းမောင်းကောင်းပါတယ်။ အောက်ပိုင်း အတွင်းခန်း အပြင်ပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အရမ်း သေသပ်လှတဲ့ ကားကောင်းလေး တစ်စီးရောင်းပေးခြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ -Original tv back cam. - TSI turbo - ဘေးကြည့်မှန် မီးကျောက်ပါ။ - Semi-Auto (7 speed) - Pw, Ps, ABS, back wiper. - Car is in best Condition Price: 172 သိန်း ph: 095107983.
Lot Number: #545580